रारा दह : सौन्दर्यकी रानी | Nagarik News - Nepal Republic Media
रारा दह : सौन्दर्यकी रानी
शोभा ज्ञवाली १४ असार २०७५ ८ मिनेट पाठ
रारा दहलाई हेरेपछि मेरो मनमा फ्याट्ट निस्क्यो– ‘पृथ्वीकी रानी !’
तपाईंलाई लाग्ला– पृथ्वीकी रानी भनेको के होला ? यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? पृथ्वी आफैँमा सुन्दर छ अनि यस पृथ्वीकी रानी पनि हुनसक्छे र ?
राजा महेन्द्रले रारालाई अप्सरासँग तुलना गरी कविता कोर्न हुन्छ भने मेरो मनमा उठेको कुरा व्यक्त गर्न किन नहुने ?
हो, मलाई रारा पुग्दा यस्तो लाग्यो– यो पक्कै पनि पृथ्वीकी रानीको बासथलो हुनुपर्छ । पृथ्वी आफैँमा अप्सरा हुन् भने पक्कै ती अप्सराकी रानी यो रारा दह र यस वरिपरिको भूमि हुनुपर्छ ।
मलाई यस्तो किन लाग्यो, आफैँलाई थाहा छैन तर जब हामी नेपालगञ्जबाट ताल्चा एयरपोर्ट हुँदै करिब पाँच घण्टा हिँड्दै मनले नअघाएसम्म देखिएका दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्दै यहाँ आइपुग्यौँ– यहाँको वातावरणबाट मुग्ध नहुने कोही थिएन ।
कुनै ठाउँमा पाँच घण्टा लगातार हिँड्न हामी सायदै कल्पना गर्छौं होला । झन् काठमाडौँको धुँवा–धुलो र अस्तव्यस्ततामा त यो कल्पनातीत कुरा बन्न पुग्छ । यहाँ भने मलाई यत्तिका घण्टा हिँडे भन्ने कुनै महसुस भएन । चारैतिर सल्लाका रुख, बीचबीचमा आउने दृश्यहरू र माथि आकाशमा नीलो गगन ! दृश्य नै यस्तो हुन्छ कि कुन बेला थाक्ने भन्ने सायद हामी बिर्सदा हौँला !
रारा क्षेत्र घुमेर फर्किएको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर यत्तिका दिनपछि पनि सम्झँदै मन हरहर र शितल हुन्छ ।
रारा ताल हाम्रो देशकै सबैभन्दा ठूलो ताल हो । यो ताल जङ्गललै जङ्गलको बीचमा छ । यसको गहिराई १६७ मि., लम्बाई करिब ५.१ कि.मि. र ३ कि.मि. चौडाई छ । हरियो सल्लैसल्लाको बीचमा यो ताल रहेको छ । माथि छेउछाउ जताबाट हेरे पनि यसको सुन्दरता कतै–कुनै कमी देखिदैन । यस ताल वरिपरि परिक्रमा गर्न करिब ४ देखि ५ घण्टा लाग्छ । ताल वरिपरि पैदल नै यात्रा गरे पनि हुने, घोडाबाट पनि यसको परिक्रमा गर्दा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो तालको पानी एकदमै सफा र कञ्चन छ । त्यहाँ अहिलेसम्म कसैले पनि लुगा धुने, नुहाउने, फोहोर गर्ने गरेको देखिएन र साथै त्यस्तो गर्न निषेध पनि रहेछ ।
तालको पानीको रङ पनि तीन किसिमको देख्न पाइने रहेछ । बिहान एक किसिमको रारा देखिन्छ भने दिउँसो अर्कै र साँझ फेरि अर्झै रङमा बद्लिने रहेछ । राराबाट देखिने सिस्नेरी र काञ्जिरोवा हिमालको छायाँदृश्य अति नै मोहक थियो । त्यहाँ फुल्ने प्राकृतिक फूल र बोटबिरुवाले रारालाई बेहुली नै बनाएको भान हुन्थ्यो । अझै बिहानीपख सूर्य उदाउँदा राराको अनुहारमा सूर्यको किरण पर्दा त्यो क्षणको सौन्दर्य वर्णन गरी कुनै शब्दमा बाँध्नै सकिन्न ।
रारा तालनजिकै दुई वटा होटलहरु डाँफे र भिलेज हेरिटेज छन् । यी दुवै होटलमा कम्तिमा एक रातको रु १००० बाट सुरु हुन्छ । हेरिटेजमा त अट्याच बाथरुमको दुई वटा रुम छन् । रारामा दुई रात बस्दा हामी हाइकिङ, साइक्लिङ, हर्सराइडिङ गर्दै मुर्मा गाउँ साथै टावर पनि घुम्न सक्छौं । मुर्मा टावर ३६३० मिटर अग्लो छ भने यसबाट हामीले ३६० डिग्री राराको भ्यू अवलोकन गर्न सक्छौँ । यसरी रारा घुम्दा समय बितेको पत्तै हुँदैन ।
त्यहाँसम्म पुग्ने सबभन्दा सजिलो र छोटो बाटो नेपालगञ्जबाट पर्छ । त्यहाँबाट मुगुको टाल्चा एयरपोर्ट हुँदै गयो भने सबैभन्दा चाँडो पुगिन्छ । काठमाडौंबाट सडक यात्रा गर्ने हो भने तेस्रो दिनमा मात्र रारा पुगिन्छ । काठमाडौँबाट हिँड्दा भोलिपल्ट नेपालगञ्जको दोस्रो नाग्मामा पुगिन्छ भने तेस्रो दिनमा रारा पुगिन्छ । त्यहाँबाट दुई घण्टामा ताल पुगिहालिन्छ । त्यस्तै बाजुराबाट पनि हिँडेर रारा पुग्न सकिन्छ ।
हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको छ । यहाँका जनता मिलनसार छन्, धैर्यवान्, सोझा र साधारण छन् । जसका कारण हाम्रो देशमा पर्यटक आएपछि फ¨कन मान्दैनन् वा खुसी भएर जान्छन् वा फेरि आउने वाचा गर्छन् । अलिकति राज्यले यहाँको पर्यटन उकास्ने व्यवस्था मिलाइदियो भने निकै नै सुधार आउने थियो ।
पर्यटकको समयको महत्व बुझिदिने, फ्लाइट समयमै उडाउने, रेगुलर फ्लाइट रद्द गराएर चार्टड मात्र गराई यात्री ठग्ने काम नगर्नेजस्ता काम यहाँ तुरुन्तै सुधार्नुपर्ने देखियो । स्थानीयको भनाइअनुसार यस्तो क्रियाकलाप बारम्बार त्यहाँ भइरहँदोरहेछ । यस्तो हुँदा नेपाली सोझा जनता पनि मर्कामा परे अनि विदेशी पर्यटकको पनि सबै किसिमको समय तालिका गञ्जागोल हुन पुग्छ ।
यस्ता कुरामा नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा यात्रुले दुःख त पाउँदैनन् नै यस क्षेत्रको पनि ठूलो प्रचारप्रसार हुन गई कायापलट नै हुने सम्भावना देखिन्छ । हामीले संसारै लोभिने किसिमको प्राकृतिक खजाना पाएका छौं, यस खजानासम्म पुग्न खान, बस्न राम्रो सुविधाका लागि या त सरकारले नै पूर्वाधार बनाइदिनु पर्छ या त यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहनका लागि निजी क्षेत्रलाई हौस्याउनु पर्छ ।
यस्तो हुन सकेको खण्डमा स्थानीय तहले यही रारा देखाएर पूरै क्षेत्रको कायापलट गर्न सक्छ भन्ने मलाई महसुस भयो ।
रारा दह सौन्दर्यकी रानी नागरिक परिवार